Real Madrid oo kusoo biirtay loolanka loogu jira saxiixa Mishiinka lala barbardhigo xidigii hore ee France Claudio Makalele. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Real Madrid oo kusoo biirtay loolanka loogu jira saxiixa Mishiinka lala barbardhigo xidigii hore ee France Claudio Makalele.
Real Madrid oo kusoo biirtay loolanka loogu jira saxiixa Mishiinka lala barbardhigo xidigii hore ee France Claudio Makalele.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 12:30 PM Ciyaaryahanka u dhashay dalka France ayaa soo jiitay indhaha kooxda ka dhisan caasimadda dalka Spain kadib bandhig wanaagsan uu ka sameeyey horyaalka Ingiriiska iyo midka imika uu ka wado Euro 2016 ka.
Bandhiga uu sameynayo Kanté ayaa noqday mid soo jiitay indhaha kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaarada duqda ah, Sidoo kale Kante qaab ciyaareedkiisa waxaa la dhacay macalinka Les Blues ka Didier Deschamps.
Sida lagu qoray wargeyska ugu carabka dheer dalka Spain kooxda Los Blancos ayaa dooneysa sidii ay xidigan ku keeni laheyd gegida Bernabeu, 25 sano jirkan ayaa lamaane buuxa u noqon kara Casemiro oo la filayo inuu boos ka helo nuqulka cusub ee horyaalka LFP ga dalka Spain.
Macalinka kula guuleystay Champiosn League kooxda Real Madrid Zezou ayaa kamid ah dadka la dhacsan qaab ciyaareedka wanaagsan ee Kanté ka sameynayo Euro 2016 ka waxa uuna xidigii hore ee Juventus iyo Real Madrid la bar bar dhigay Kanté mishiinkii qadka dhexe ee kooxaha Real Madrid iyo Chelsea Claudio Makelele.
“Kanté waxaan ka dhax arka mishiinkii hore Claudio Makelele” sidaas waxaa saxaafada u sheegay Zidane.
Warka ayaa intaas ku darayo in kooxda heysta 11 ka Champion ku baadi goobeysa saxiixa xidigan aduun dhan 25 Milyan oo Euro xagaagan inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in kooxda Real Madrid kaliya aysan aheyn waxa doonayo saxiixa xidigan kooxo dhowr oo ka dhisan gudaha dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale daneynayo saxiixiisa waxaana horkacayo kooxahaas Arsenal, Chelsea iyo Man United.